दलान नेपाल : कसरी अतिरञ्जित बन्यो राष्टपतिको जनकपुर भ्रमण ?
विवाहपन्चमीको अवसरमा राष्टपति भण्डारी जनकपुर आउने चर्चा चले लगतै स्थानिय मोर्चाका नेताहरुले त्यस विरुद्ध प्रर्दशन गर्ने जनाएको थियो । आन्दोलनमा रहेको मोर्चाले आफुहरुको पुर्ववत निर्णय अनुसार सरकारी अधिकारीहरुको भ्रमणको विरोध गर्ने जनाएका थिए । तर स्थानिय प्रशासनको ठाउको दुखाइ त्यती वेला जती वेला युवा आन्दोलनकारीहरुको समाजिक सन्चाल मार्फत खुल्ला रुपमा आफुहरुले जस्तो सुकै कदमहरु चाल्न सक्ने चेतावनी दिए । यता राष्टपतिको भ्रमण मार्फत मधेशमा छिर्न नसकिरहेको सरकारी पक्षले छुटै सन्देश तथा आफना स्थानिय नेता कार्यकर्तालाई उत्साहित पार्न खाजेको देखिन्थ्यो । परिस्थिती अत्यन्तै प्रतिकुल छ भन्ने कुरा सरकारी पक्षलाई राम्ररी थाहा थियो । तर पनि राष्टपति कार्यलयको एउटा भनाई थियो, जसरी पनि भ्रमण हुनै पर्छ ।
राष्टपति भण्डारीको जनकपुर भ्रमणको १ दिन पुर्व सम्म स्थानिय अधिकारीहरु अन्योलमा थिए । स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आन्दोलनरत मोर्चाका स्थानिय नेताहरु र विभिन्न युवा आन्दोलनकारी समुहहरुलाई वोलाएर सामुहिक छलफल पनि गरे । सवैले एक स्वरमा भनेका थिए, हामी यसको विरुद्धमा कडा प्रर्दशन गर्छौ, आउने सक्ने परिस्थतीको जिम्मेवार सरकारी पक्ष हुने छ । उक्त घटनाको अनुगमनमा खटेका एक स्थानिय मानव अधिकारकर्मी भन्छन, विवापन्चमीको पुर्व सन्धया सम्म स्थानिय अधिकारीहरु पनि गृहमन्त्रालयमा स्थिती सहज छैनन भनेर नै रिर्पोटिग गर्दै मिल्छ भने उक्त भ्रमण स्थगीत गराउने लाइनमा थियो । तर वेलुकी पर्दै नेपाली सेनाको ब्कंरहरु जनकपुुर बजारमा घुम्न थालेको देखियो । त्यस पछि मात्रै स्थानिय अधिकारीहरु अब भ्रमणको हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भए । राष्टपतिको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाको प्रधानसेनातिको सिधा कन्टोलमा हुने गर्छन ।
उता जनकपुरमा स्थानिय युवा आन्दोलनकारीहरुले पुर्व भने झै १ पुषको विहानै देखि जनकपुरको विभिन्न चौकहरुमा प्रर्दशन गर्दै राष्टपति विरुद्ध नारावाजीहरु गरेका थिए । तर जव उनी जनकपुर पुगिन त्यस पछि स्थिती अत्यन्तै असहज भएको देखिन्छ । आन्दोलनकारीहरु मन्दिरको परिसर भित्रै प्रवेश गरेको देखिन्छ र त्याहा बनाइएको पन्डालमा आगो लगाएर जलाउनुको साथै तोडफोड गरे । साथै उनलाई लक्षित गरेर पेटोल बम प्रहार पनि भयो । विवाहपन्चमीको विधिवत रुपमा हुने सम्पुर्ण विधिहरु प्रभावित हुन पुग्यो । जानकी मन्दिरको महन्थ स्थानिय प्रहरीको सहयोगमा साझ शोभा यात्रा निकाल्ने सुरसारमा थिए तर सकेनन ।
यस पछि सुरु भयो यो झमेला ?
जानकी मन्दिरका महन्थ राम तपेश्वर दास
राष्टपति भण्डारी जनकपुरवाट फर्के पछि साझ सम्म तनावपुर्ण रहेको जनकपुर वेलुकि वाट मात्रै अलि साम्य भएको थियो तर स्थानियमा आक्रोश तीव्र थियो । राष्टपति भण्डारी मन्दिरमा प्रवेश गर्ने वेला तीर्थालूहरु संग सुरक्षकर्मीहरुले गरेको व्यहवारको फेटोहरु समाजिक सन्जालमा छयापछप्ती छाइसकेको थियो । एउटा ६० बर्ष भन्दा वढी उमेरको आइमाइको कपाल तानेर प्रहरीले मन्दिर परिसरवाट तानीरहेको फोटो जत्रतत्र छाएको थियो । धाइतेहरु स्थानिय अस्पतालमा उपचार गराइरहे । तर साझ पहिलो युवा आन्दोलनकारीहरुको सन्जाल मासका संयोजक सरोज मिश्राले भोली विहान ९ वजे जनकपुरका आम नागरिकहरु संग अपिल गर्दै गंगाजल लिएर उपस्थिती हुन आग्रह गरे । पछि त्यही कार्यक्रमले यत्रो विवाद निमत्याएको सर्वत्र चर्चा भयो । जसलाई उनीहरु शुद्धीकरण अभियान भनेका थिए । १ पुष अर्थात १६ डिसेम्बरको साझ सरोजले आफनो फेसबुक अपिलमा जानकी मन्दिर भित्र तीर्थालूहरु संग भएको व्यहवारलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ तर पछि एक्कासी समाचारहरुमा महिला अधिकार देखि के के सम्म आएको देखियो । उनले फेसबुकमा पोष्ट गरेको साम्रगी यस्तो छ
भोली बिहान ९ बजे जानकी मंदिरमा
भोली मिति २०७२/९/२ गाते का दिन बिहान ९ बजे देखि सम्पूर्ण जनकपुर बासी , महिला , पुरुष , युवा , बिद्यार्थी , क्रांतिकारी , ब्यापारी देखि लिएर सम्पूर्ण भद्र भलाआदमी ज्यु हरुलाई आ आफ्नो घर बाट गंगाजल लिएर आउन आग्रह गर्दछु । आज जून पापीहरु द्वारा जानकी मैयाको पबित्र स्थल मा यात्रुहरु माथी दमन गरियो , जानकी जी लाइ अपबित्र गरियो त्यस स्थलको सुधि गर्नु अति आबश्यक भएको हुनाले सम्पूर्ण नगरबासी गंगाजल ल्याई मंदिर परिशर लाइ राम्ररी सफा गरी पापी पापिनहरु को गंध हटाई दिन हूँन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । भगवान को बिहेमा खलल ल्याउनेहरु को बंश सखाप हुन्छ । माता जानकी ले साक्छात दर्शन दिएर मलाई भन्नु भयो मेरो परिशर सफा गराइदेउ । कृपया सबै जाना सहयोग गर्नुहोला हार्दिक आग्रह छ हजुर ।
उनले आग्रह गरेको यो अपिलमा पापीहरु भनेर जानकी मन्दिरका तीर्थालुहरु माथी गरिएको कुटपिट संग तुलना गरेको प्रष्ट बुझिन्छ भने अर्को तर्फ पापी पापनीहरु दुवै शब्द प्रयोग गरेका छन । जसले कुनै पनि शर्तमा महिला मात्रैको रुपमा उनले राष्टपति भण्डारीलाई मात्रै अपमान गर्न खाजेको देखिदैनन । तर त्यसको दुई दिन पछि एउटा भारतीय अखरवार र त्यसको भोली पल्ट जनकपुरको एउटा स्थानिय अखवार यसवारेमा उनको भनाई सहीत अर्को आशयको समाचारहरु छापेको देखिए । त्यसको भोली पल्टै अनलाईनखवरले यी दुवै समाचारको आधारमा र काग्रेस नेतृ किरण यादवको् भनाईलाई लिएर समाचार सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ । त्यस पछि एक्कासी काठमाडौमा जनकपुरमा राष्टपतिलाई देखाएर सम्रग महिला माथी ठुलो दुव्र्यहवार भएको हल्ला खल्ला मचियो । चार दिन अघि सम्म केहि नदेखेको राष्टिय मिडियाहरुमा प्रमुख समाचारहरु छायो ।
कसरी बन्यो अतिरन्जित ?
भारतीय अखवारले छापेको समाचार प्रति सरोज मिश्रले आफनो फेसबुक मार्फत त्यही दिन दिउसो खण्डन गरेको देखिन्छ । र भोली पल्ट अनलाईन खवरले जनकपुर टुडेको सन्दर्भ समेत कोटयाएर समाचार प्रकाशित भए पछि सरोलले त्यसलाई खण्डन गरेको देखिन्छ । र उक्त समाचार आए पछि स्थानिय स्तरमा सबैको एउटै भनाइ देखिन्छ कि सेना प्रहरीले कुकुर सहित जुता चप्पल लगाएर मन्दिर भित्र छिरे पछि हामीले शुद्धिकरण अभियान थाल्यो । काठमाडौले चर्चामा ल्याउन खाजेको विद्यवा भन्ने शब्दलाई उनले इन्कार गरेको देखिन्छ । र स्वयंम सरोजले अपिल गरेको आफनो फेसबुक स्टाटसमा समेत त्यो कुरा झल्कदैन । तर पनि उक्त प्रकरण आखिर कसरी यत्रो चर्चामा आयो ?
कतिपय जानकारहरुको अनुसार काग्रेस नेतृ किरण यादव वर्तमान राष्टपतिको चाडै सम्धीनी बन्ने लाइनमा छिन । पुर्व राष्टपति डा रामवरण यादवको भतिजी समेत रहेकि किरणको छोरा सग वर्तमान राष्टपति भण्डारीको छोरी संग विहे हुने मिती समेत तय भइसकेको छ । र किरण यादव भण्डारीको जनकपुर भ्रमण सफल पार्न अहोरात्र खटेकी थिइन । जसमा जानकी मन्दिरका महन्थ देखि काग्रसको संरक्षमा हुर्कदै आइरहेका जनकपुरका नामुद डन जीवनाथ चौधरी सम्म सक्दो लागे र त्यसकै परिणत स्वरुप हुदै नभएको कुरालाई यत्रो वितण्डाको रुपममा चर्चामा लउाउने काम भयो । जनकपुरको स्थानिय पत्रिका जनकपुर टुडे जीवनाथ चौधरीको प्रभावमा मात्रै होइन कि अदृश्य लगानीमा समेत चलेको कसै वाट लुकेको छैन ।
पछिल्लो पटक आन्दोलनको क्रममा जनकपुरमा युवाहरुको ठुलो जमात सरोज मिश्र लगायत अन्य सन्जालहरु मार्फत आन्दोलनमा होमिए पछि चौधरीहरु हैरान भएको स्थानिय गतिविधीहरुले देखिन्छ । किनकी यी युवाहरुको अभियानमा जनकपुर सजय साह र जीवनाथ चौधरी दुवैको विरुद्धमा खडो रुपमा हुने गर्छन । जनकपुरबम काण्डमा सजय प्रकरण सुर भएकै देखि नै सरोजको नेतृत्वमा सरसफाइ सहितको जनकपुर युथ डेभलेपमेन्ट गतिविधीहरु हुदै आइरहेको देखिन्छ । त्यही गतिविधीमा लागेको जमात पछिल्ले समयमा आन्दोलनको लागी मास नामक सन्जाल बनाएको देखिन्छ । आन्दोलनमा सरोज सहितको मासका युवाहरुको प्रभाव जनकपुरमा वढन थाले पछि स्थानिय स्तरमा धुवीकरण समेत भएको छ ।
गएको साउन ३ र ४ गते जनकपुरमा भएको प्रतिरोध लगतै तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोईराला जनकपुर जादा मासको पुर्व योजना नै भित्रीवाट सुचना लिक गराएर असफल बनाउने काम पनि भएको थियो । पछि यी युवाहरुको जमातले सुराकी भन्ने कुरावाट उच्च सर्तकता अपनाउन थाले । साउन ३ र ५ गते जनकपुरमा मिश्र नेतृत्व मासले आन्दोलन चर्काए पछि उनी विरुद्ध टुडेमै अहले सम्म कम्तीमा तीन पटक उनको विरुद्धमा समाचार आउनुले त्यसको वारेमा धेरै वझवुझारत गर्नु पर्दैन ।
जीवनाथ चौधरी र जानकी मन्दिरको महन्थको साटघाठको वारेमा जनकपुरमा कसैले भन्नु पर्ने अवस्था नै छैन । मन्दिरको सम्पतिको हिनमीना गरेको देखि कयौन अपराधिक क्रियाकलापमै अभियोग खेपीरहेका जानकी मन्दिरका महन्थ राम तपेश्वर दास काठमाडौ सम्म मुद्धा अझै धाईरहेका छन । उता जिविसमा करौडौको घोटोला प्रकरणमा उनी विशेषवाट भ्रष्टाचारी ठहर भइ हाल सर्वोच्चमा मुद्धा लडदै छन ।
त्यसैले जनकपुरमा महन्थ र जीवनाथको गविविधी आन्दोलनकै क्रममा विभिन्न शंकास्पद देखिनु र जीवनाथको अत्यद्यिक प्रभावमा रहेको जनकपुर टुडेले नै उक्त समाचारलाई फेरी प्राथमिकतमा राखेर इस्यू बनाउने प्रयास गरे पछि यो कसरी यत्रो अतिरन्जित भयो भनेर प्रश्न गरीराख्नु पर्दैन ।
कतिपय वुद्धजिवीहरु भन्छन, राष्टपति कार्यलयको कमजोर आकंलन र स्थानिय स्तरमा महन्थ, जीवनाथको स्वार्थको चपेटामा राष्टपतिको मर्यादामा आच पुग्नु आफैमा दुखद पक्ष हो । र यसकै निहूमा आन्दोलनकारी युवा जमात माथी उठाइएको प्रश्न पनि अनुचित छन ।